Home News Maxaa kusoo kordhay wafuudii maanta gaartay Garoowe!!
Maxaa kusoo kordhay wafuudii maanta gaartay Garoowe!!
Maanta Magalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal waxaa tagtay madax kala duwan,kuwaas oo doonaya inay ka qeyb galaan Xaflada Caleemo saarka Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Madax ka tirsan Dowladda Federaalka,Dowlad goboleedyada iyo Siyaasiyiin ka mid ah kuwa Mucaaradka ku ah dowladda ayaa lagu soo dhaweeyay Garoowe,hayeeshee waxaa halkaasi lagu arkay dhacdooyin ku cusub Puntland.
Intii lagu guda jiray soo dhaweyntii Madaxda kala duwan ayaa waxaa markii ugu horeysay Garoowe ciidamo gaar ah la tegay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam,kuwaas oo tiro ahaan gaarayay ilaa 30 askari oo hubeysan,waxana la siiyay laba ka mid ah Gaadiidka Ciidamada Puntland.
Dhacdada labaad ayaa aheyd markii taliyaha Ciidanka Booliska Puntland Janeraal Muxudiin Axmed Muuse uu mar qura sheegay in garoonka laga saaro dad watay astaamo iyo calamo halku dheg u ahaa xisbiga uu hogaamiyo Cabbdiraxmaan Cabdishakuur ee Wadajir.
Labadaasi dhacdo ayaa ugu hadal-heynta badnaa Magalada Garoowe Maanta,waxaana ay ahaayeen dhacdooyin ku cusub Maamulka Puntland tan iyo markii la’aas aasay,iyada oo hoggaamiyihii ugu horeeyay ee Maamul gobleed uu ciidao gaar ah la tago Garoowe.
Si kastaba Maalinta berito ah ayaa la filayaa in Magalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal ay ka dhacdo munaasabada Caleemo saarka Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni,iyada oo amniga siweyn loo adkeeyay,waxaana beri la filayaa inay tagaan wafdi uu hoggaaminayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.